/ Products / Nootropics powder / Fasoracetam upfu
Rating: SKU: 110958-19-5. Category: Nootropics powder
ICHINYANYA ndechekugadzira uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika pakukura kweFasoracetam powder (110958-19-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Fasoracetam powder iri mutsvuku kunyorera pfumbi isina kupiswa, iyo inosuruvarisa zvikuru mukuravira. Izvo zvinoshora anti-amnesiac kupfuura piracetam, uye inoshanda senheyo yenheyo system stimulant. Icho chapamusoro-soro choline chinowedzera enhancer uye chinowedzera nitric oxide synthase basa mu cerebral cortex. Saizvozvowo ne piracetam, kuyeuchidza kusanganiswa kwemigumisiro ye pramiracetam kunogona kubviswa neine adrenalectomy.
Fasoracetam powder Basic Characters
Name: Fasoracetam powder
Molecular Kurema: 158.15
Storage Temp: Chengeta pane firiji yekunze kana kunotonhora
Color: Mucheka wakachena kana usina kuchena
Raw Fasoracetam powder powder mukuwedzera kweuropi kushandiswa
Fasoracetam powder ine zita rekutengeserana seLAM 105, NFC-1, NS 105.
Raw Fasoracetam powder Usage
Munyika ino inokurumidza kufamba-famba, pane zvido zvevanhu kuti vave nekukwanisa kufungisisa zvakasimba pamakumbo avo uye nemabasa akawanda ekugadzirisa munharaunda chero ipi zvayo yebasa; kubva kuvashandi vezvokurapa kusvika kune zvishoma-mubairo wekudya wevashandi. Chido ichocho chekuramba, kukwikwidzana nekubudirira chinoratidzwa pamakorojiji ekorosi munyika yose. Chido chekuwana zvikwereti zvakanyanya uye kunyora mapepa akaisvonaka; shure kwezvose, iyo ndiyo nzira chete yekukwikwidzana mumazuva ano America. Vadzidzi, vadzidzisi uye vanoisa vanhu zvakafanana vose vangada kuvandudza kushanda kwavo. Nootropics ndeye mhuri yezvinodhaka izvo zvakagadziriswa zvakanyanya uye zvinoratidza zvakawanda zvekushandiswa kwakakurumbira. Imwe yemishonga mune iyo inozivikanwa seye, mhuri ye racetam, yose inotorwa kubva pakutanga ye nootropic, piracetam. Iyi mishonga inoita kuti iwedzere chiyeuchidzo uye mafungiro ekufunga, mune imwe nzira kana imwe, iyo yakaita kuti ive yakakurumbira pakati pevadzidzi vekoroji. Munguva pfupi yapfuura, imwe yeootropic yekucherechedza yaive yeFasoracetam powder, kana zita rayo rakanzi "5 - [(piperidin-1-yl) carbonyl] pyrrolidin-2-one", iyo inongova nemuromo (Rajaganapathy uye et al. , 5127). Iyi racetam chaiyo, inozivikanwa seFasoracetam powder, iri kuratidza kuva yakavimbisa.
Iko hakuna chimiro chakakosha cheFasoracetam powder kuvanhu. Uhu hunoratidza hutachiona hunoti hudiki hutachiona hunotenderera huchikomberedza 10 - 15 mg nemadhora makuru muC30 - 50 mg pavanoshumira katatu pazuva.
Zvikomborero zveFasoracetam powder zvinowanikwa mune anecdote, asi pane zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuratirana. Sezvo kune mamiriyoni evana nevechiri kuyaruka vachishandisa mishonga yeAmphetamine-based ADHD, kuongorora kuongorora fasoracetam zvinokonzera chiratidzo chakanaka. Kunyange zviri nani, Fasoracetam powder yakaita kuti zvikamu zvechipiri ne3 zvekuongorora zvipatara, izvo zvingaratidza kushanda kwakasimba kwechinangwa ichi. Kubva munaJune 2016, mishonga iyi yakanga ichiri mumatambudziko aya.
Maererano nehupupuriro hwehutachiona hweFasoracetam raw powder hunobatsira, hutano hwekusimudzira uye kukurudzira kunobatsira. Mumwe munhu akafananidza kukurudzira zvinokonzera kusarudzwa uye mumwe akati zvakanyanya kukurudzira simba kupfuura kukurudzira.
Kunze kwezvipfungwa izvi zvakananga uye zvakagadziriswa, kune uchapupu hwehutachiona hwehutachiona pamwe chete. Imwe nyanzvi yekuongorora yakaratidza kuti Fasoracetam yakasvibiswa pfumvha inogona kudzivirira kukanganiswa kwemusoro. Izvi zvakajairika pakati pe racetam mitsara yemishonga uye inonzwisisika kuti Fasoracetam powder ingaratidza dzakawanda zvedzimba imwechete.
Imwe rubatsiro inofadza yeFasoracetam powder ndeyekudzivirira mwoyo uye kuzvidya mwoyo. Kuongorora makonzo neakadzidza kusabatsiri kwakaratidza kuti mishonga iyi yakanga ine simba rinopesana nehutachiona pasina humwe hwemigumisiro (yakadai sekukurukurirana kweMaoI). Ichi chidzidzo chakagumisa kuti GABA (B) kumusoro-mutemo wakakwanisa kuwedzera mhinduro yekuedza mumhuka.
Yambiro paFasoracetam Raw powder side effects
Parizvino hazvizivikanwe nemigumisiro yeRaw Facoracetam powder mune zvinyorwa zvezvesayenzi, asi izvozvo hazvirevi kuti hazvina matambudziko. Hazviiti chete kuti mishonga yemishonga inouya nematambudziko, asi uchapupu hwehutachiona mumasangano ezvinodhaka hunogona kutitaurira zvinhu zvishoma pamusoro pemishonga.
Kune rimwe, mamwe mahedheni anecdotal anoratidza kuderedzwa mumasimba. Mumwe munhu akatsanangura izvi, asi anoita seasingadi uye zvichida akavhiringidzika nezvimwe zvinoshandiswa.
Nguva yakareba vashandisi vemaoko vanogona kufunga Raw Fasoracetam powder ishae (inoratidzika seyo itsva inosunungurwa mwedzi mumwe nomumwe), asi ichi ndicho chigadzirwa chitsva chinowanikwa mumhuri ye racetam. Yakagadziriswa muZ1960s, piracetam ndiyo yekutanga yemhuri uye inoenderera kuva imwe yezvinonyanya kuzivikanwa neotropic zvinodhaka pamusika.
Kubatsira kweRaw Facoracetam powder kunonyanya kufanana, asi pane zvimwe zvitsvakurudzo zvokutanga zvekusimudzira zvirevo. Sezvakanyorwa, Fasoracetam powder iri kuongororwa muPaseti II / III mishonga yekurapa kwekucherechedza kusakwana kwehuwandu hwehutano (ADHD) .
Zvimwe touted benefits zvakabatana nekuchengetedzwa kwemusoro  sezvinowanzoitika mukati me racetam nemhuri. Kunewo kushungurudzika uye mafungiro ezvimwewo zvingangodaro zvinogona kuonekwa kuti zvinokonzerwa nekugadzirwa kweGABA muuropi . Kunyange zvazvo uchapupu hwacho hushoma uye husingarevi, kune ruzivo rwakanyanya kuratidza kuti runogona kuva nootropic inobudirira yehutano hwekuita.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti pramiracetam inogona:
Wedzera kuwanda kwekuyerera kweropa
Kuvandudza nguva yakareba yekuyeuka nekudzidza kwepakati
Wedzera hukama hwepamusoro hwecholine hunotora
Wedzera nitric oxide synthase mu cerebral cortex
Kuderedza migumisiro yemishonga yemamenesiac
CHII CHINHU CHEFASORACETAM?
Fasoracetam Powder inhengo ye nootropic mu racetam mhuri ye nootropics. Marudzi anobatanidza boka guru rezvikwata zvakasiyana-siyana, zvose zvakashandurwa kubva kumubereki wechikamu Piracetam, yakawanikwa mu1960s. Fasoracetam's chemical chemical is: (5R) -5- (piperidine-1-carbonyl) pyrrolidin-2-one.
Fasoracetam inogona kubatsira kuvandudza matambudziko uye mafungiro.
KUTI PASORACETAM IYE POWDER IVE KUTI IVEI?
Fasoracetam Powder inoshandiswa nekugadzirisa zvinogamuchirika muuropi. Inoshanda pane cholinergic, GABA, uye glutamate receptors, iyo yose inobatsira pakuumba nekuchengetedza zvichedzo zvitsva. Kungofanana nemakemikari akawanda e-nootropic uye pamwe chete nemakwenzi, Fasoracetam Powder inokanganisa uropi hunoita kuti tive nemafungiro akanaka.
Unhu hwehutano hwehutano uye tsvakurudzo inoratidza kuti Fasoracetam powder inogona kuvandudza chiyeuchidzo nekuisa pfungwa, kuvandudza kushushikana, kukurudzira mafungiro, uye kunyange kubatsira kurwisa kudzivisa nekuwedzera kukurudzira uye kujekesa mupfungwa. Vashandi vanotenga ripoti yeFasoracetam Powder vachikwanise kuwana zvakawanda, vadzidze zvakajeka, uye kuchengetedza mamiriro ekudzikama pavanonzwa vaine simba.
Kuti uwedzere kurongeka (mukati 1kg) inogona kutumirwa mumazuva ekushanda kwe3 mushure mekubhadhara.
Nzira yekutenga Fasoracetam powder kubva kuAASRAW